अल्पायुमै बितिजाने यी पाँच गायक - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अल्पायुमै बितिजाने यी पाँच गायक
जसले चर्चित गीत गाए, लोकप्रिय भए तर छोटो आयुमै गए...
काठमाडौं ९ भदौ
अल्पायुमा बित्ने पाँच गायक- खेमराज गुरुङ, अरुण थापा, लोकबहादुर क्षेत्री, सोम वज्राचार्य र कुल पोखरेल (घडी सुई घुम्ने क्रममा)
छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा!
पारिबाट को आयो?
अरुण थापाको पनि ३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै श्रोताहरुबीच नाम कहलिइसकेको थियो। २०४० को दशकमा उनका गीतले श्रोताहरुलाई नयाँ मिठास दिएका थिए। थापाका ‘भुलुँ भुलुँ लाग्यो मलाई’, ‘चोट के हो? व्यथा के हो?’ जस्ता गीत अत्यन्तै रुचाइएका थिए। स्वरमा करुणा भरिएको उनको आवाज त्यतिबेलाका अरु चल्तीका गायकहरुको भन्दा भिन्दै थियो। अरुण थापाको अल्पायुको कारक पनि उनको अव्यवस्थित जीवन र खानपिन नै मानिन्छ। अत्यधिक रक्सी सेवनले उनको स्वास्थ्य बिग्रेपछि २०५६ सालमा ४७ वर्षको उमेरमा उनी बितेका थिए।
अनि मलाई जिनको पाइन्ट ल्याउने रे!
जमुनाको फेदैमा, मनकामना!
यो गीत बजारमा आउनासाथ खेमराज गुरुङको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो। पूर्वेली हाक्पारे शैलीमा गाइएको यो गीत एक कान–दुई कान–मैदान भनेजस्तो देश–विदेशका नेपाली श्रोताहरुसम्म फैलियो। स्थानीय सहरहरूमा हुने महोत्सवदेखि विदेशमा हुने कन्सर्टसम्म उनी ‘वारि जमुना’ गीत लिएर पुग्ने अवसर पाए।
४२ वर्षको उमेरमा गायक गुरुङको निधन भएको छ। खानपानको हेलचक्राइँका कारण उनको स्वास्थ्य बिग्रेको बताइन्छ। उनी जन्डिसबाट ग्रस्त हुँदा समेत रक्सी सेवन छाडेका थिएनन्। संखुवासभाको खाँदबारीमा जन्मिएका गुरुङले पूर्वेली लोकभाकाबाट लोकप्रियता आर्जन गरेका थिए।
प्रकाशित ९ भदौ २०७३, बिहिबार | 2016-08-25 21:25:48
दुई जापानी नागरिक नेपालबाट निकालिए
सरकारी सवारीमा राइँदाइँ, गृहका एक अधिकृतलाई दुई गाडी